Nin hubaysan oo aan haybtiisa la aqoon oo labo askari oo ciidamada Puntland ka tirsan ku dilay Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandNin hubaysan oo aan haybtiisa la aqoon oo labo askari oo ciidamada Puntland ka tirsan ku dilay Boosaaso
January 16, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Boosaaso waa xarunta ganacsiga dowladda Puntland ee Soomaaliyeed. [Sawirka: Maxamed Axmed/Puntland Mirror]
Boosaaso–(Puntland Mirror) Nin hubaysan oo aan haybtiisa la aqoon ayaa galabta oo Isniin ah magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari ku dilay labo askari oo katirsan ciidamada dowladda Puntland, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Askarta geeriyootay ayaa magacyadooda lagu sheegay Maxamed Jaamac Xirsi iyo Bashiir Maxamed Cabdirixmaan.
Ninkii dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta markii ay toogashadu dhacday, sida ay sheegeen goobjoogayaashu.
Intii lagu guda jiray bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay, magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa waxaa ka dhacayay weraro dilal ah oo taxane ah kuwaasoo lagu bartilmaameedsanayo saraakiisha ammaanka iyo masuuliyiinta sare ee dowladda.
May 8, 2017 Ciidamada ammaanka Puntland oo nin sixiroole ah ku qabtay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso
Unknown gunman kills two Puntland soldiers in Bosaso